﻿	ပြီးပြည့်စုံသောအိမ်လုပ်ချောကလက် Chip Cookies - ချက်ပြုတ်နည်းများ
တစ် ဦး taco အတွက်အမဲသားမည်မျှအောင်စ
rotel နှင့်အတူနှေးကွေး cooker ကြက်သား tortilla ဟင်းချို
မှို၏ ala ရှငျဘုရငျကိုမုန့်စာရွက်ကြက်သား
ပြီးပြည့်စုံသောချောကလက် Chip Cookies
မီးဖိုထဲမှချောကလက်ပူကွတ်ကီးများထက်နွေးသောအရာအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဒီချက်ပြုတ်နည်းကိုနူးညံ့ချောမွေ့ပြီးcheုံပြည့်ဝစွာစားနိုင်သော cookies များကိုပြုလုပ်ရန်ဂရုတစိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
သငျသညျအခြားချောကလက် chip ကို cookie ကိုစာရွက်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ် ဦး က cookie ကိုဂန္ထဝင်
ကျနော်တို့အများကြီးကိုချစ်သလောက် oatmeal cookie ကို , ချောကလက် Chip ကွတ်ကီးနဲ့တူဘာမျှတကယ်ရှိပါတယ်။ Softုံပျော့ပျောင်းသော sweetုံချို Cheုံ Chewy ။ ။ Per
အခန်းအပူချိန်ကြက်ဥ: သငျသညျအအေးကြက်ဥကိုသုံးပါကသင်အရည်ပျော်သောထောပတ်ကိုထိတ်လန့်စေပြီးအချို့ကိုပြန်လည်ခိုင်မာစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုသူတို့ရောသင့်သကဲ့သို့ရောနှောခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
Flour တိုင်းတာနည်း The အကောင်းဆုံး ဒီစာရွက်အတွက်ဂျုံမှုန့်ကိုတိုင်းတာတဲ့နည်းကတော့ညင်ညင်သာသာတိုင်းတာတဲ့ခွက်ထဲကိုဇွန်းချပြီးပိုလျှံမှုကိုဖယ်ရှားဖို့ဖြောင့်တဲ့အစွန်းကိုသုံးခြင်းဖြစ်သည်။ ဂျုံမှုန့်ကိုတိုင်းတာရန်တိုင်းတာသည့်ခွက်ကို သုံး၍ ထုပ်ပါ။
ချမ်းအေး: ဒီချက်နည်းကချောကလက်တွေကိုများများမဖြန့်ဖြူးနိုင်အောင်အချိန်နည်းနည်းလေးလိုတယ် - ပြီးပြည့်စုံသောချောကလက်ကွတ်ကီးများအတွက်ပေးဆပ်ရန်သေးငယ်သည့်စျေးနှုန်း!
မမှီပါနှင့် သူတို့အနားတွေအညိုရောင်အထိကွတ်ကီးတွေကိုဖုတ်သင့်တယ်။ သူတို့ကအရမ်းအနည်းငယ်အလယ်၌ undercooked ရပါမည်။
မီးဖို - ဤစာရွက်တွင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသောဂျုံမှုန့်ကိုသုံးပါ။ ၎င်းကိုတိုင်းတာသည့်ခွက်ထဲသို့ဇွန်းပေးပြီးမြှပ်ခြင်းဖြင့်တိုင်းတာရန်သေချာစေပါ။ ဂျုံမှုန့်ကိုတိုင်းတာသည့်ခွက်နှင့်မညှပ်ပါနှင့်သို့မဟုတ်၎င်းသည်ခွက်ထဲတွင်အလွန်ခြောက်သွေ့သောမုန့်စိမ်းဖြစ်စေနိုင်သည်။
အရည်ကျိုထောပတ် - အရည်ကျိုထားသောထောပတ်သည်ကွတ်ကီးများကိုပိုမိုဝါးမျိုစေသည် (အရည်ပျော်သွားသောထောပတ်သည်ကွတ်ကီးအချပ်တိုင်းတွင်ရှိသကဲ့သို့သူတို့ကို ပို၍ အရသာရှိစေသည်) ။ အရည်ပျော်ပြီးနောက်အအေးသေချာပါစေ။ မဟုတ်ရင်မင်းကသကြားအရည်ပျော်သွားပြီးမင်းရဲ့မုန့်စိမ်းကအရမ်းအသုံးတည့်လိမ့်မယ်။
သကြား - ဤစာရွက်တွင်အညိုရောင်နှင့်အဖြူရောင်သကြားနှစ်မျိုးလုံးပါရှိသည်။ အညိုရောင်သကြားမှာအစိုဓာတ်ပိုများပြီးပျော့ပျောင်းသောဝါးကွတ်ကီးများပြုလုပ်သောကြောင့်အညိုရောင်သကြားအချိုးအစားပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။
ပြောင်းဖူး - Cornstarch (သို့မဟုတ်သင်အင်္ဂလန်တွင်နေထိုင်ပါကပြောင်းဖူးမှုန့်) သည်ဤချောကလက်ချစ်ကွတ်မုန့်များကိုအနူးညံ့ပျော့ပြောင်းစေသည်။ ကွတ်ကီးများကိုထောပတ်အရည်ပျော်စေခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးရှုံးသွားသောဓာတ်လှေကားအနည်းငယ်ကိုကူညီသည်။
ချောကလက် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကွတ်ကီးများတွင် Semi-ချိုသောအစားအစာကိုပိုနှစ်သက်သော်လည်းသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောနေရာတွင်သို့မဟုတ်နုသောသို့မဟုတ်နို့ချောကလက်သို့မဟုတ်ချောကလက်တုံးများကိုရောနှောသုံးနိုင်သည်။
ကွတ်ကီးမုန့်စိမ်းအများစုကဲ့သို့ပင်၊ ဤမုန့်စိမ်းကိုနောက်ကျသောနေ့၌အေးခဲစေနိုင်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအသားညှပ် - စီတန်းဒယ်အိုးသို့ရှာဖွေနှင့်အစိုင်အခဲသည်အထိအေးခဲ။ အေးခဲပြီးတာနဲ့ cookie စာရွက်ကိုဖယ်ရှားပြီးရေခဲသေတ္တာအိတ်ထဲထည့်ပါ။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာတစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီကြာအေးခဲစေပြီးညွှန်ကြားထားသည်အတိုင်းမုန့်ဖုတ်ရမည်။ မုန့်စိမ်းသည်အလွန်အေးလျှင်ထမင်းချက်အချိန်တစ်မိနစ် (သို့) နှစ်ထည့်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
Flat Cookies များကိုရှောင်ရှားရန်
ဒီတော့ဒါတွေကနူးညံ့ပြီးနူးညံ့ချောမွေ့ဖို့ငါတို့အကြိုက်ဆုံးအချက်များဖြစ်တယ်။ အကောင်းဆုံး ချောကလတ်အမှုန့်လေးများပါသောကွတ်ကီများ။
ပိုမိုနှစ်သက်သော cookie ချက်ပြုတ်နည်းများ
'အဆိုးဆုံး' ချောကလက်ကွတ်ကွတ်ကီးများ သကြားမှ Run နေဖြင့်! ( ကြိုးစားရမယ် )
လွယ်ကူသော Triple Chocolate Cookies - ချောကလက်ချစ်သူရဲ့အိပ်မက်။
ချောကလက်ကိတ်မုန့်ရောနှောထားသောကွတ်ကီးများ - သုံးပစ္စည်းဖြတ်လမ်းစာရွက်
လွယ်ကူသောသကြားကွတ်ကီးများ - ဂန္ထဝင်စုံလင်ခြင်း
ချိစ်ကိတ်မုန့်ချောကလက် Chip Cookies
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်တကျိပ်တပါး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၂၆ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှုလေး ကွတ်ကီးများ စာရေးသူမမန်းသာအမ် ငါသည်သင်တို့ကိုသင်၏အကြိုက်ဆုံးချောကလက် chip ကို cookie ကိုစာရွက်အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးရတာဝမ်းသာပါတယ်! ဤချောကလက်ချစ်ကွတ်ကီးများကိုsoftုံနူးညံ့ပြီးcheုံပြည့်ဝစွာစားနိုင်သော၊ နောက်ထပ် cookie စာရွက်ကိုသင်ဘယ်တော့မှမလိုအပ်တော့ပါ။ ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၁ ခွက် unsalted ထောပတ် အနည်းဆုံး ၁၀ မိနစ်အရည်ပျော်ပြီးအအေးခံ (226g)
▢1 ¼ ခွက် အညိုရောင်သကြားတင်းကျပ်စွာထုပ်ပိုး (၂၅၀ ဂရမ်)
▢½ ခွက် သကြား (၁၀၀ ဂ)
▢၁ ကြီးမားသောကြက်ဥ + 1 အနှစ် (အခန်းအပူချိန် ဦး စားပေး) *
▢1 ½ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း vanilla ထုတ်ယူ
▢2 ¾ ခွက် All- ရည်ရွယ်ချက်မုန့်ညက် (၃၅၅ ဂ)
▢နှစ် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ပြောင်းဖူး
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ
▢¾ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ဆားငန်
▢1 ¾ ခွက် semisweet ချောကလက်ချစ်ပ် (အပိုထပ်ဆောင်းများ၊ ထပ်ထည့်နိုင်သည်) (၃၀၀ ဂ + အပို)
ကြက်ဥနှင့်ကြက်ဥအနှစ်ထည့်ပါ။ vanilla ထုတ်ယူအတွက်မွှေပေးပါ။ ဘေးဖယ်ထားပါ။
တဖြည်းဖြည်းစိုစွတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများထဲသို့မုန့်ညက်အရောအနှောထည့်ပါ - မုန့်ညက်အားလုံးစုပ်ယူနိုင်အောင်ကောင်းစွာနှိုးဆော်။ ချောကလက်ချစ်ပ်များတွင်မွှေပေးပါ။
မုန့်စိမ်းကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင်မိနစ် ၃၀ ထားပါ။
မီးဖိုအား ၃၅၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၁၇၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) အပူပေးပြီးပုရွက်ဆိတ်စာတန်းများဖြင့် cookie စာရွက်များကိုပြင်ဆင်ပါ။
12ဇွန်းတစ်ဇွန်းကိုအသင့်ပြင်ဆင်ထားသော cookie စာရွက်များတွင်ကပ်ပါ။ အနည်းဆုံး ၂ စင်တာခြားပါ။
၁၁ မိနစ်ခန့်မုန့်ဖုတ်ရမည် - ကွတ်ကီးများသည်အလယ်ဗဟိုတွင်အနည်းငယ်ပျော့ပျောင်းနေပုံရနိုင်သည်။ အလွန်အကျွံမသုံးပါနှင့်သို့မဟုတ်သင့် cookies များကိုအရမ်းခက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကြက်ဥများကိုအခန်းအပူချိန်သို့လျင်မြန်စွာသယ်ဆောင်နိုင်ပြီး ၁၀-၁၅ မိနစ်ခန့်ပူနွေးသောရေအိုးတစ်လုံးထဲတွင်ထည့်ပါ။
(ပေးထားသောအာဟာရဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်သည်ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးချက်ပြုတ်နည်းနှင့်အသုံးပြုသည့်ကုန်ပစ္စည်းများအမှတ်တံဆိပ်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ )
သော့ချက်စာလုံးချောကလက်ချစ်ပ် cookies များ၊ သင်တန်းအချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။
ပိုများသော Great Cookie Recipes
Funfetti ချောကလက် Chip Cookies
Reese ရဲ့ကျပ်ချောကလက် Chip ကွတ်ကီး
ချောကလက် Chip Cookie မုန့်စိမ်း Brownies